Habsanku Yuusan Kala Harin! | KEYDMEDIA ONLINE
Bashiir M. Xersi - Sanadkii tagay ayaan qoray qormo ahayd: “Haraadigu yuusan kala harin!” in kasta oo dadka qaar dhibsadeen erayga “HARAADI” sidii inuu magac beel noqday oo kale, ama ay tahay in adeegsiga erayga afka looga idin qaato, waanse loo joojinayne, maanta aan meel kale ka abbaaro waa iska xaal adduun, oo waa harka labadiise gelline.
Ma istiri wali waxaa la taagan yahay maalintii aan qormadaa qorayey meeshii la taagnaa? Kama darane, armaa dib loo laabtay? Anisa sidaa ayey ila tahay adiga mooge, balse, aan u imaado midda jirta iyo jugjug meeshaada joogta jaangoynta noqotay.
Kooxda DAMAC-JADIID markii ay Xalane ku soo bexeen ayaa waxaa meel walba is qabsaday waxaa dhacay ISBADDAL, lagu saleeyey arrimo dhawr ah, oo ay ka mid yihiin: 1- Ammaanka Muqdisho oo ka soo ranayey. 2- Alshabaab oo Muqdisho iyo Magaalooyin dhawr ah laga saaray. 3- Is doorashadii u horraysay dalka gudihiisa lagu qabtay. 4- Qaar ka mid ah Qurba-joogta iyo qaxootiga oo dalka dib ugu soo laabanayey. 5- Madaxda cusub inay ahaayeen mudanayaal aan lagu aqoon qoriga diinta iyo qabiilka. 6- Dib u dhis iyo maalgashi ka billowday Muqdisho. 7- Reer Galbeed oo xarumo shirqool ka samaystay Muqdisho. 8- In la xakameeyey saamaynta iyo ka mid noqoshada qabqablayaasha XIL-DHAANNADA ama XIG-DHIBAANNADA cusub. 9- Burcadbadeeddii oo yaraatay. 10- Ifafaale xasillooni oo guud ahaan Soomaaliya laga dareemayey.
Qodobbadan iyo kuwa kale ayaa sabab u ahaa in badan ku kadsoomaan hanqaltaagga galay, balse, ay ku hungoobeen ugu dambayn, maantana aan guraynnayaan mirihii iska hubin la’aanta sida marar badan sooyaalka soo maray oo kale.